लेदो भएको बीयर बेच्ने कम्पनीको उदाहरणीय काम : धरानको बगरकोटमा जोड्यो सोलार बत्ती !
ARCHIVE, POWER NEWS » लेदो भएको बीयर बेच्ने कम्पनीको उदाहरणीय काम : धरानको बगरकोटमा जोड्यो सोलार बत्ती !
काठमाडौँ - होलीका समयमा बीयरमा लेदो भेटिएपछी विवादमा तानिएको टुबोर्ग बीयर उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्ने कमपनी गोर्खा ब्रुअरीले सामाजिक काम गरेको छ । कम्पनीले धरान बगरकोटको सोती खोलामा २२ वटा सौर्य बत्ती तथा तीनवटा सीसी टिभी क्यामेरा जडान गरेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा गत चैत्र काठमाडौंको हात्तिसारमा एक्काइस वटा सौर्य बत्ती जडान गरिएको थियो भने बगरकोटको यस दोस्रो चरणको पहलका लागि स्थानीय प्रहरी र बासिन्दासंग सहकार्य गरेको हो।
सौर्य बत्ती जडान उद्घाटन समारोहमा बोल्दै गोर्खा बु्रअरी कासेल्स निर्देशक काजिमान सुब्बाले भने, ‘यससंस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाले हामीलाई अझ सक्षम र सबल बनाउन सहयोग पुरयाउनुका साथै समाजलाई विकासतर्फ लैजान पनिटेवा पुर्याउने छ । यसका साथै यस सहकार्यले हाम्रा व्यवसायिक सान्झेदारहरुमा हाम्रा ब्रान्ड र गोर्खा बु्रअरीको समाजप्रतिको उत्तरदायित्व बोध सम्बन्धि प्रचार प्रसार हुनेछ ।’
टुबोर्ग बीयर पिउनेहरु होसियार !